သိုးမွှေးနှင့်ဖန်ဆင်း Felted လက်အိတ် - ဆိုနေ့စဉ်ပုံရိပ်တစ်ခုလှပပုံမှန်မဟုတ်သောများအပြင်။ ထိုသို့သောမော်ဒယ်များယနေ့များမှာ - အနုပညာအလုပ်။ ခံစားခဲ့ရသခင်အရှိဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောဒီဇိုင်းများနှင့်ရေးဆွဲနဲ့သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။ ထို့အပြင်, ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းအတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍတိုက်ရိုက်ပစ္စည်းပါဝင်သည်။ Felted သိုးမွှေး pricked နှင့်အလွန်ကောင်းသောနွေးနေသည်။ သို့သော်ကလက်ကိုင်နွေးခဲ့ကြသောကြောင့်အရေးကြီးသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ရှည်လျားပါကဆောင်းတွင်းရာသီအတွက်နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေ၏အခြေခံဖြစ်လာရသောအရှိဆုံးအပူ, ယူပြီးစွန်ပလွံကြောင်းသက်သေပြခဲ့ကြသည်။
ခေတ်သစ်အမြိုးသမီးမြားဆန်လက်အိတ်များအကြားအဓိကကွာခြားချက်ပုံစံမျိုးပြုမူ။ ဆုံးရိုးရှင်းတဲ့သူတို့အရောင်တွေ၏အကူးအပြောင်းနှင့်အတူ၎င်း၏မော်ဒယ်ကိုရှာပါ။ ဤတွင်, သခင်, တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအရောင်အေးဂျင့်များ, သူတို့ကိုအထူးကုသမှုကိုပြုပြင်တာတွေ။
အများဆုံးမူရင်းသံမဏိပုံစံတွေနဲ့လက်အိတ် felted ။ ဤသည်ပုံစံများ, ပုံစံမျိုးစုံသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ် ထုတ် ခံစားခဲ့ရကာလအတွင်း။ ဒီဇိုင်နာများလှပသော accessorize ကြောင်းသေးငယ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။
သို့သော်အပေါင်းတို့၏အများဆုံးအကြီးစားပန်းချီကားများနှင့်အတူလက်အိတ်တောင်းဆို။ သင်တစ်ဦးကြံစည်မှုချထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှိရာမော်ဒယ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ဆက်စပ်မှုနှစ်ဦးစလုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်စွတ်သောမူရင်းရေးဆွဲဖြစ်ကြသည်။
image ကိုဖန်တီးခြင်းအတွက်ဣတ္နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု patch ကိုပုံစံမျိုးဖြင့်သင်တို့ကိုအဆင်းလှသလိုခံစားရတယ်လက်အိတ်ကူညီပေးပါမည်။ ထိုသို့သောထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာများအတွက်ပန်းပွင့်, အရွက်, တိရစ္ဆာန်များ, သီးနှင့်ဝမ်းနည်းသို့မဟုတ်ခံစားခဲ့ရသိုးမွှေးတူညီထားသည့်အခြားအဆင်တန်ဆာကိုဖြည့်။ ထိုးပြီးချုပ်ဖြည့်စွက်နှင့်အတူအလွန်မူရင်းကြည့်ခံစားခဲ့ရလက်အိတ်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးအလှဆင်အဖြစ်ပုတီး, ပုတီး, sequins, rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်စေလိမ့်မည်။
Dolce Gabbana Dolce ရို Excelsa
နံ့သာဆီ Aurobin - စံပလီကေးရှင်းများနည်းလမ်းများနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော
မီးခိုးရောင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Baston သူမ၏မွေးနေ့အပေါ်အီဗာ Longoria များအတွက်အံ့သြစရာလုပ်
ကလေးခေါင်းလျှော်ရည် - ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ကလေးငယ်ကို၏ဆံပင်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးတစ်လက်ကိုရွေးချယ်သနည်း
လိပ်ခေါင်းများအတွက် Vishnevsky ဆီမွှေး
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွ - အလှဆုံးနဲ့အဆင်ပြေမော်ဒယ်
မန္န - ရိုးရှင်းတဲ့စာရွက်
စိန့်ဂျော့ဂ်ျ၏အိုင်ကွန် - ဆုတောငျးလကောအသို့နည်း
Rihanna နှင့်သူမ၏ရည်းစားအတူတကွနေဆဲ: photofact
ကောင်လေးတစ်ယောက်များအတွက်ပျိုးခင်းထဲမှာပရိဘောဂ - ထိုသူငယ်၏အသက်ပေါ်မူတည်ပြီးညာဘက်ရွေးချယ်မှုလုပ်ဖို့ဘယ်လို?
အဘယ်သူမျှမဆီးမတားနှင့်နိုင်သည့်မတိုင်မီဆိုဗီယက်ကနေ 13 ဒဏ္ဍာရီကိတ်မုန့်,